Linux Lite 4.8 ikozvino yawanikwa iine mashoma mashoma shanduko | Linux Vakapindwa muropa
Linux Lite 4.8 ikozvino yave kuwanikwa, iine mashoma mashoma shanduko uye inokoka Windows 7 vashandisi
"Kufa" kweWindows 7 ichave iri chiitiko chaicho. Iyo yaive yekupedzisira vhezheni yeMicrosoft's system iyo vazhinji vashandisi vaifarira ndiani zvino achamanikidzwa kuchinjira kuWindows 10 kana vachida kuramba vachiwana rutsigiro. "Masayendisiti emakomputa" mudenderedzwa rega rega ave kuraira munhu wese waanoziva nezve chii uye nemabatiro ekuchiita. Kugoverwa kweLinux kunoedza kubata hove mumvura dzinetsekana, uye pakati peavo vanofarira tine Jerry Bezencon uyo akavhura maawa mashoma apfuura LinuxLite 4.8.
Iyi vhezheni nyowani inosvika inodarika mwedzi mina mushure meiyo yapfuura dhirivahari uye anozviita na mashoma mashoma shanduko, semamwe mapakeji akagadziridzwa anosanganisira (angangoita) vhezheni dzeFirefox kana GIMP. Iyo kernel yakagadziridzwa zvakare, asi inoramba iri paLinux 4.15.0-74, zvinoreva kuti yakafanana neLinux Lite 4.6, asi kusanganisira zvigadziriso zvazvino.
Linux Lite 4.8 inosanganisira yakagadziridzwa mapakeji
Dzimwe shanduko dzakaunzwa mushanduro iyi ndeidzi:
Linux 4.15.0-74. Tsanga dzakagadziriswa dzinowanikwawo mune yavo repository inokwira kuLinux 5.4.
LibreOffice 6.0.7.3. Pasuru iyi, kunyangwe yakagadziridzwa, ichiri mune yechinyakare vhezheni (iyo yakakurudzirwa yezvikwata zvekugadzira ndeyev6.2.8 yesuti).
Zvakadaro zvakavakirwa paUbuntu 18.04.3.
Iyo Linux Lite 4.8 kuburitswa kwave kumberi. Yakanga yakarongerwa Kukadzi 1, 2020, asi ndafunga kuiburitsa nhasi kuti iwirirane nekuguma kweWindows 7 hupenyu kutenderera mune izvo chaizvo chirevo chezvinangwa. Aya mavhiki mashoma mashoma anogona kunge aine chekuita nenyaya yekuti yakawanda inoshamisa shanduko inofanirwa kucherechedzwa yakaverengerwa.
Vashandisi veiyo yapfuura vhezheni yeLinux Lite vanogona kusimudzira kubva Menyu / Favorites / Isa zvidzoreso. Avo vanoda kuiisa kekutanga, senge vashandisi veWindows 7 vavanokoka, vanogona kudhawunirodha vhezheni idzva (Nhaka kana UEFI / Secureboot) papeji rimwe chete retsamba yekuburitsa yaunokwanisa kuwana kubva pano.
Iwe uri mumwe wevaya Windows 7 vashandisi vari kuzouya kuLinux?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Lite 4.8 ikozvino yave kuwanikwa, iine mashoma mashoma shanduko uye inokoka Windows 7 vashandisi
Ini pachangu ini ndaingomanikidzwa kushandisa windows 7 muhofisi yebasa, windows 7 haina kusvika mukurumbira wakawanda, kunyangwe mune imwe nzira chete yevashandisi ve desktop vasingazive nezvekushandisa kweimwe linux kugoverwa, kuti chero chero desktop nharaunda inoenderana zvido zvemunhu chero upi zvake.
Pave nechinguva kubva pandakatama kubva paWindows kuenda kuGnu Linux uye distro yakasarudzirwa iyi ndiZorin os nekuda kwekufanana kwayo neiyo Redmon inoshanda sisitimu.
Naizvozvo, ndinorikurudzira kune avo vanoda kutora nhanho hombe. Iyo ine zvakwakanakira zvakati wandei, senge: kufanana kwayo kukuru neWindows 7, iko kusununguka kwekushandisa, kugadzikana kwayo kukuru uye nekumhanyisa, kuve nyore kwayo maererano nesarudzo, kuwanda kwesoftware, nezvimwe.
david anokurumidza akadaro
Iwe pachako, unogona kuenderera uine windows 7 ine antivirus yakadai seMicrosoft yakakosha uye malwarebites chishandiso, sezvo google chrome uye firefox zvichapa kuenderana kwemamwe makore maviri neizvozvo iwe unogona kuve wakasununguka uye wakachengeteka .. kune rimwe divi kana usinga unoda kuisa pangozi kurudziro yangu kana iwe uine komputa ine makore gumi uye inoshandisa Zorin os Lite 15.1, ini ndinoikurudzira kuti ive nyore uye kufanana kwayo nemawindows 7, kureruka kwayo uye kugadzikana
Pindura kuna david veloz
Mhepo * ws 7 ine tambo refu. QM $ mira kutsigira zviri pamutemo zvinoreva zvishoma kana hapana. Dambudziko chairo harisi kutsvaga rechitatu-bato software iyo ichiri kutsigira iyo vhezheni yeMhepo * ws.
Wind * ws 10 yanga ichitanga kushandiswa pandakangochinjira ku64-bit vhezheni yeXP. Uye haimbove dambudziko. Kushaikwa kweiyo inoremekedzwa "rutsigiro" hakuna kumbonzwa (mune yangu). Nekudaro, ini ndaifanira kusasiya XP zvakajeka nekuti ndakanga ndisisakwanise kuwana maapplication emaapplication andaishandisa aizoitsigira.
Icho chaive chekupedzisira Push iyo yakanditungamira kuLinux. Uye anga ave makore mana kubvira: D.
Xubuntu senguva dzose, kuisa zvese neruoko kubva ku mini.iso
Juan Carlos Garcia. akadaro
Chaizvoizvo, vanhu vazhinji vanotsvaga iyo "nyaradzo" yeWindows, ndinoona zvichinetsa kuti urikuda kurodha pasi chirongwa chinobatsira uye kuti zvinhu zvinegumi neshanu zvemazana zvakaiswa nemahwindo anovhura, uye kuti nekuda kwekukanganisa iwe tinya woisa chimwe chinhu iwe unoda antivirus uye antitodo izvo muchokwadi izvo zvavanoita kushandisa zvakakosha zviwanikwa zvemuchina wako, ini ndine mint uye zvinondipa runyararo rukuru rwepfungwa izvo ini handifanire "kubheura" iyo.key kana iro registry. .uye kwandiri zvishoma zvinoita kunge Windows inoita senge inopindirana uye inonakidza hapana chimwe chinhu kwandiri kupfuura LINUX MINT ... !!!
Pindura Juan Carlos García.
César Augusto Munoz Palomino akadaro
Zvakanaka kuti vashoma vashandisi vatange kushandisa Linux uye kuti ngano yekuti yakaoma kuisa / kushandisa inobviswa, ini ndinoshandisa debian uye zvese zvakanaka, kunyangwe ini ndine maviri boot akaisirwa, Windows 7 uye Debian
Pindura kuna César Augusto Muñoz Palomino
Izvo zvichiri kuda kuziva kuti zvimwe kana zvishoma zuva rimwe chete iro rutsigiro rweMicrosoft rweWin7 rwunopera, ivo pachavo vanotangisa zviri pamutemo yavo nyowani yeChromium-based Edge ine vhezheni yeWin7.
Chokwadi nezveBlockbuster. Kukanganisa muenzaniso we chero uine chaunovenga